Beesha Daarood iyo hogaanka Soomaaliya | allsanaag
Beesha Daarood iyo hogaanka Soomaaliya
Waa kuma siyaasiga Beesha Daarood ee bedeli doona Farmaajo?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Famaajo. oo afartii sano ee ugu danbaysay dalka soo hogaaminayey ayaa mar walba haystay % 80 iyo badan kalsoonida bulshada Soomaaliyeed.
Dhowrkii bilood ee ugu danbaysay maalinba maalinta ka sii danbaysa kalsoonidii uu madaxweyne Farmaajo ka haystay shacabka Soomaaaliyeed hoos ayeey u siii dhacaysay, waxayna ka soo bilaabantay doorashaddii dib u dhacday, iyo maanta oo ay xoojisay dacaayadda ay siyaasiyiinta Hawiye ku fureen ee Ikraam Tahliil, iyagoo ogaaday inaanu jirin maamul uu ku tiirsan yahay.
Maanta madaxweyne Farmaajo waa dhaawac siyaasad ahaan, mana haysto waqti uu kaga soo kaban karo dhaawacan soo gaaray ee uu u Tol iyo Asxaab waayey, sababtuna waxay tahay waqti yar ee ka harsan doorashaddii Soomaaliya . Tusaale ahaan Waxaad ku garan kartaa in Farmaajo dhulka yaalo, oo adah tahay inuu istaago mid ka mid ah maamuladdii uu dhisay ee Galmudug oo maalmahan heshiisiinayey isaga iyo Ra’iulwasaarihiin . waxay baraha Bulshada soo dhigen in dhex dhexaadintii ay wadeen uu fashilmay, sababna uu yahay madaxweynaha.
Hadaba waa kee Siyaasiga kale eeka soo jeeda beesha Daarood ee qaadi kara jidkii Farmaajo oo kasban kara Quluubta umadda Soomaaliyeed ama Xildhibaanada soo socda oo codkooda heli kara?.
Labada Siyaasi ee Siciid Deni oo ka soo jeeda beesha Majeerteen iyo Maxamed Cabdi Xashi, oo ka soo jeeda beesha Dhulbahante, mid walba si ayaa laga yaabaa inuu ugu guulaysto hogaanka Soomaaliya.
Aqoonyahan Maxamed Cabdi Xaashi, oo ka mid ahaa wasiiraddii ugu horeeyey dawladda Farmaajo oo markuu arkay sida xun ee dhaqaalihii Soomaaliya, oo khibrad dhaqaale oo caalami ah u leeyahay loo musuqmaasaqayo shaqaddii isaga tegay , kana mid ah aqoonyahana Soomaaliyeed kuwa aan qabiilka ku qaraaban, kana soo jeeda reer siyaasad ahaan aad looga yaqaan Soomaaliya iyo Putland, rajo fiican ayuu leeyahay in loo doorto hogaanka Soomaaliya .
Waxaana laga yaabaa in lagu doorto aqoontiisa, khibradiisa, wada shaqaynta uu la leeyahay bulshada caalamka iyo iyada oo laga daalay sadexda reer ee siyaasiyiintoodu Soomaali halkaa dhigay Abgaal, Majeerteen iyo Mareexaan.
Siyaasiga labaad waa madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo afartii sano ee Puntland hogaaminayey iyo isaga oo Soomaaliya meelna uga bixin uu ka helay khibrad siyaasadeed iyo sida qabiilada Soomaalidu u shaqeeyaan.
Maamulka Puntland, Jubbland, beesha Isaaq oo aan cabsi ka qabin, una arka inuu saaxiibkood yahay ama soo tijaabiyey, wax walbana ku dayey intuu Puntland hogaaminayey , isaga oo aan hal mar u jawaabinmaamulka Somaliland , Hawiye oo ka cararaya in mar kale Farmaajo Muqdisho u soo fariisto iyo beelaha laga tirada badan yahay intuba waxay u badan tahay inay u codeeyaan Deni si uu madaxweyne u noqdo.
Ugu danbayntii lama saadaalin karo siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinkooda, oo inta badan waxa la doortaa midka jeebka qoyan. Laakiinse Deni iyo Xaashi labaduba rajo fiican ayeey leeyihiin inay Soomaaliya hogaamiyaan .Iyada taasi jirto ayaa welina madaxweyne Farmaajo uuna quus ahayn oo waxay ku xiran tahay rajadiisu xaaladda Ikraam Tahliil, haddii uu markii hore uu ku khaldamay sida uu u maareeyey, hase ahaatee uu hadda wax ka bedelayo
← Markaan tabar haysey maxaad qabatay? Buuq uma baahnin →